(၇)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို ပထွေးက အဓ္ဓမပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား လူစိတ်မရှိတဲ့ နွားကို အများသိအောင် ရှဲပေးပါအုံး - သတင်းရွာ
မတ္တရာမှာ (၇)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို နောက်အိမ်ထောင် ပထွေးက မုဒိန်းကျင့်တာ သမီးလေးကို ” သမီးအဖေအခန့်ထဲမှာစာအုပ်သွားယူပေးပါလား”ဆိုပီး
ကလေးမလေးက အခန့်ထဲဝင်သွားတာနဲ့ (၃)ကျိန်တိတိမုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာ အခုတော့ ဆေးကုသနေပါတယ်…😭😭 မိန်မတွေလဲ ယောက်ျားယူရင် ကြည့်ပီယူကြပါ ကလေးမလေးသနားပါတယ်….
မြန်​မာပြည်​မှာ ဒီလိုမျိုးအမြဲ ကြားနေရတယ်​ ​….တွေ့လဲ​တွေ့ဘူးပါတယ်​ ….လိုးဝစဉ်းစားလိုမရတဲ့ အ​ဖြေတခုပါ ….ဒါမှမဟုတ်​ရင်​ ခေတ်​​ပြောင်​လို့လား မသိဘူး ……အဲလို​တော့ မဖြစ်​သင့် ဘူးထင်​တယ်​ …..ကိုယ်ချင်​စားကြပါ။
စာနာစိတ်ထားကြာပါပါ……..နားမလည်​တဲ့ က​လေး​တွေကို အဲလိုလူမဆန်တဲ့ အပြုအမူမျိုး မလုပ်​သင့်​ဘူးထင်​တယ်​ ……လုပ်​တဲ့သူကို ထိုက်​ထိုက်​တန်​တန်​ အပြစ်​​ပေးပါလို့ ​တောင်​ဆိုချင်​ပါတယ်​…..
အလိုမတူဘဲ လူတ​ယောက်​ကို ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာတဲ့အပြုအမူမျိုးမလုပ်​သင့်ဘူး …..မိန်းမကလဲ ​ရှေ့ဖြစ်​လာမဲ့ အန္တရာယ်​ကို မမြင်​ကြဘူး …..​နောက်​လင်​ကလိုချင်​ကြတယ်​ ….ခု​တော့ ကြားထဲက ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ ခ​လေးက ပ​ထွေးစော်​ကားတာခံရတယ်​။
အဲလိုကောင်မျိုးကို ​သေဒါဏ်​​ပေးပါလို့. ပြည်​သူ​တွေက ဒီ​လောက်​​အော်​နေလဲ ညှာတဲ့ သူ​တွေက ညှာတာ​နေကြ​​တော့လည်း ​ရှေ့ဆက်​မ​တွေးရဲ​တော့ဘူး……..။
မတ်တရာမှာ (၇)နှဈအရှယျသမီးလေးကို နောကျအိမျထောငျ ပထှေးက မုဒိနျးကငျြ့တာ သမီးလေးကို ” သမီးအဖအေခနျ့ထဲမှာစာအုပျသှားယူပေးပါလား”ဆိုပီး
ကလေးမလေးက အခနျ့ထဲဝငျသှားတာနဲ့ (၃)ကြိနျတိတိမုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တာ အခုတော့ ဆေးကုသနပေါတယျ…😭😭 မိနျမတှလေဲ ယောကျြားယူရငျ ကွညျ့ပီယူကွပါ ကလေးမလေးသနားပါတယျ….
မွနျမာပွညျမှာ ဒီလိုမြိုးအမွဲ ကွားနရေတယျ ….တှလေဲ့တှဘေူ့းပါတယျ ….လိုးဝစဉျးစားလိုမရတဲ့ အဖွတေခုပါ ….ဒါမှမဟုတျရငျ ခတျေပွောငျလို့လား မသိဘူး ……အဲလိုတော့ မဖွဈသငျ့ ဘူးထငျတယျ …..ကိုယျခငျြစားကွပါ။
စာနာစိတျထားကွာပါပါ……..နားမလညျတဲ့ ကလေးတှကေို အဲလိုလူမဆနျတဲ့ အပွုအမူမြိုး မလုပျသငျ့ဘူးထငျတယျ ……လုပျတဲ့သူကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ အပွဈပေးပါလို့ တောငျဆိုခငျြပါတယျ…..
အလိုမတူဘဲ လူတယောကျကို ရိုငျးစိုငျးယုတျမာတဲ့အပွုအမူမြိုးမလုပျသငျ့ဘူး …..မိနျးမကလဲ ရှဖွေ့ဈလာမဲ့ အန်တရာယျကို မမွငျကွဘူး …..နောကျလငျကလိုခငျြကွတယျ ….ခုတော့ ကွားထဲက ဘာမှမသိနားမလညျတဲ့ ခလေးက ပထှေးစျောကားတာခံရတယျ။
အဲလိုကောငျမြိုးကို သဒေါဏျပေးပါလို့. ပွညျသူတှကေ ဒီလောကျအျောနလေဲ ညှာတဲ့ သူတှကေ ညှာတာနကွေတော့လညျး ရှဆေ့ကျမတှေးရဲတော့ဘူး……..။